Ry Trinite Masina indrindra, Ray Zanaka sy Fanahy Masina, midera sy misaotra anao satria noharianao ary sitrakao ho kristianina, fa indrindra nantsoinao manokana ho relijiozy mitondra ny Anaranao, nofidianao ho pretranao sy ho misionera ary sitrakao ho henin-kavelomana rahefa avy namakivaky iny alina iny.
Mba hetsaho amin’ny fahasoavanao aho anio ary afaho mandrakariva amin’ny fahotana mahafaty sy amin’izay rehetra mety hahatarika ahy ho amin’ny fahotana.
Ry Fo moran’i Jesoa, amin’ny alalan’ny Fo madion’i Maria, dia atolotro Anao ny fisainako manontolo, ny teniko sy ny asako rehetra amin’ity andro anio ity : tsofy rano aho, hamasino ary afaho amin’ny fahotana rehetra.
Ry Reny Virjiny Masina, mba hangataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa mba hadio lalandava ny saiko.
Ry Reny Virjiny Masina, mba hangataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa hananako mandrakariva ny hadiovam-po.
Ry Reny Virjiny Masina, mba hangataho amin’ny Fo Masin’i Jesoa mba ho salama sy ho voatandriko madio ny vatako.
Mino Anao aho, manantena Anao, Tia Anao sy mitsaoka Anao aho, ry Trinite Masina, Andriamanitra tokana. Tahio mandrakariva aho ary hamindrao fo ankehitriny sy amin’ny andro hahafatesako.
Ankalazaina anie ny Trinite Masina,